Wararkii ugu dambeeyey ee koobka adduunka - BBC News Somali
Wararkii ugu dambeeyey ee koobka adduunka
Image caption Brazil iyo Belgium waxay u gudbeen Rubuc dhamaadka
Cayaarta hore Brazil iyo Mexico ayey dhex martay. Sidii la filayeyba Brazil ayaa badisay, 2-0 ayeyna guushu ku raacday. Labada gool, midna Neymar ayaa dhaliyey in yar ka dib markii laga soo laabtay nasashada, midka kalena cayaarta oo 2 daqiiqo ka dhiman tahay ayuu baas u dhigay Firmino oo beddel ku soo galay.
Cayaarta labaad ee xiisaha lahayd waxay ahayd tii dhex martay Japan iyo Belgium. Waxaaba la is lahaa Japan si fudud ayaa loo duban doonaa, laakin laba gool ayey kaga naxsatay Belgium. 3 daqiiqo ayadoo ay socoto qaybtii 2aad ayaa goolkii ugu horreeyey waxaa japan u dhaliyey Haraguchi, 4 daqiiqo ka dibna waxaa labeeyey Inui.
Belgium isma dhigan, dib ayey ka soo rogaal celiyeen, oo labadii goolba iska soo gudeen.
Laakin waxaa kala baxa uu yimid ayadoo ilbiriqsiyo ay ka dhiman tahay cayaarta oo garsooraha uu firimbiga afka ku hayo.
Kubbad ka soo bilaabatay gool hayaha ayuu De Bruyne la soo jeexay bartamaha, qaab weerar celis ah, ka dibna Hazard ayuu siiyey ayagoo xoog ku socda, isagana wuxuu baas qurxoon u dhigay Lukaku oo isna difaaca khiyaanay, halkii la moodayey inuu baaska qaadanayo ayuu ka dul booday kubadda, waxaana ku yimid Chadli oo xiimaya oo goolhayaha daba mariyey. Sekenno ka dib cayaartii ayaa dhamaatay.
Belgium waxay rubuc dhamaadka ku aaddan tahay Brazil jimcaha ay bishan Luulyo 6da tahay, saacadda afrikada bari markay tahay 09:00
Galabta 5ta waxaa garoonka St. Petersburg foodda is dari doona Sweden iyo Switzerland, Caawa 09kana garoonka Spartak ee magaalada Moscow waxaa isaga hor imaan doona Colombia iyo England.